Teny nalaina avy tany New York 18 momba ny tanàna lehibe eto an-tany - Fialam-Boly
Lamaody Mpanambady Ahoana No Pets Fanafody An-Trano Tsy Maintsy Jerena Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Mpahay Nahatratra Fitiavana Firaisana Asa Sy Vola
18 amin'ny teny nindramina tany New York ankafizinay
Afaka nanoratra taratasy fitiavana an'arivony izahay (ary, OK, fanontana vitsivitsy misy teny mahery) mankany New York. Saingy tsara vintana ho antsika, olona marobe no namintina tsara an'ity tanàna adala ity amin'ny fomba mahomby kokoa noho ny azontsika atao. Ireto misy teny nalaina avy tany New York 18 momba ny tanàna lehibe indrindra eto an-tany avy amin'i James Baldwin, Amy Poehler, Nora Efron ary ireo mpisaina hajaina hafa.
Mifandraika: Ireo namana 8 isaky ny New York dia manana ny faribolany
Disney fantsona mampiseho 2016
Afa-po i Londres, nametra-pialana i Paris, saingy manantena hatrany i New York. Mino foana izy fa hisy zavatra tsara efa ho avy, ary tsy maintsy maika ny hihaona aminy. - Dorothy Parker
Eric von Weber / Getty Images
Raha vantany vao nipetraka tany New York ianao ary lasa tranonao dia tsy misy toerana hafa izay ampy tsara. - John Steinbeck
Sary oksizenina / Getty
Misy zavatra tantaram-pitiavana be loatra amin'ny fahatapahana any New York. Tokony hataonao izany. Mila mipetraka any indray mandeha ianao nefa tsy manam-bola, ary avy eo tsy maintsy mipetraka any rehefa manam-bola. Avelao aho hiteny aminao, amin'ireo roa, ny farany dia tsara lavitra. - Amy Poehler
Sophie Bassoules / Getty Images
Izay teraka any New York dia tsy manana fitaovana ampy hiatrehana tanàna hafa: ny tanàna hafa rehetra dia toa fahadisoana ary, amin'ny ratsy indrindra, hosoka. Tsy misy tanàna hafa tsy dia mifanerasera loatra. - James Baldwin
Na oviana na oviana ny olona efatra ao New York no miara-miditra anaty taxi rehefa tsy miady hevitra dia nisy ny fandrobana banky. - Johnny Carson
Mampihomehy ny fametrahana tantara mpitsongo ao New York City. New York City dia tantara mpitsongo. - Agatha Christie
Mivoaka ny taxi aho ary mety ho io ihany no tanàna izay raha ny tena izy dia toa tsara kokoa noho ny amin'ny carte postales, New York. - Milos Forman
Azonao atao ny manandrana manova an'i New York, saingy toy ny nolazain'i Jay-Z hoe: 'bunghole beton izay misy nofinofy. Tsy misy azonao atao. ’- Liz Lemon, 30 Vatolampy
Sary mahazatra / Getty hariva
Ny iray dia an'i New York eo noho eo, ny iray dia azy ao anatin'ny dimy minitra toy izay ao anatin'ny dimy taona. - Tom Wolfe
Mijery eo am-baravarankely aho ary mahita ny jiro sy ny lanitra ary ny olona eny an-dalambe mirohondrohona mitady hetsika, fitiavana ary cookie mofomamy sôkôla lehibe indrindra eto an-tany, ary mandihy kely ny foko. - Nora Efron, Heartburn
Ny tanàna tazana avy eo amin'ny Tetezana Queensboro dia ilay tanàna hita voalohany hatrany, amin'ny fampanantenany voalohany ny zava-miafina sy ny hatsarana rehetra eto an-tany. - F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
Rehefa mandao an'i New York ianao dia gaga amin'ny fahadiovan'ny sisa amin'ny tany. Tsy ampy ny madio. - Fran Lebowitz
Ny zavatra tiako indrindra momba an'i New York dia ny vahoaka, satria heveriko fa diso fandray izy ireo. Heveriko fa tsy tsapan'ny olona ny hatsaram-panahin'ny olona ao New York. - Bill Murray
Tsotra fotsiny, efa tia an'i New York aho. Tsy midika hoe ‘fitiavana’ aho amin'ny fomba fiteny rehetra, ny tiako holazaina dia ny fitiavako ilay tanàna, ny fomba itiavanao ilay olona voalohany nikasika anao ary tsy tia olona toa izany mihitsy ianao. - Joan Didion
Homeko ny filentehan'ny masoandro lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny fahitana iray ny lanitra any New York. - Ayn Rand
Ny sainan'i New York City dia tokony ho olona manana kitapo efatra manokatra varavarana amin'ny sorony. - Alex Baze
Misy zavatra any amin'ny rivotra New York izay mahatonga ny torimaso tsy misy ilana azy. - Simone de Beauvoir
Ilay marina New Yorker dia mino an-tsokosoko fa ny olona mipetraka amin'ny toeran-kafa rehetra dia tsy maintsy, amin'ny lafiny hafa, manao vazivazy. - John Updike
Mifandraika: Zavatra 24 izay mahazatra ny olona any New York ihany
Sokajy Haingo Drafitra Sy Torohevitra Pets
fanafody ny dandruff sy ny volo latsaka
ny fomba hifehezana ny fanafody an-trano dandruff
sarimihetsika miaraka amin'ny dia mandeha amin'ny fotoana
yoga asanas fomba sy tombontsoa
tombony amin'ny menaka amandy amin'ny volo